तपाईहरूको पदकाे लोभ, लालचले देश र जनताको चीरहरण नहोस « Post Khabar
तपाईहरूको पदकाे लोभ, लालचले देश र जनताको चीरहरण नहोस
Published on: 29 April, 2020 10:15 am
मेरो पुस्ताले नेपाली कांग्रेसलाई माफ दिन गार्हो हुन्छ, किनकि जनताले दिएको भोटको अपमान गर्नेमा पहिलो नेपाली कांग्रेस र त्यस पार्टिका नेताहरू थिए ।
एउटा उदार, प्रजातान्त्रिक र समाजवादी पार्टी कसरी भताभुङ्ग भयो । देशले कति गुमायो सायद नेपाली कांग्रेसमा लाग्नु भएका दिग्गज अर्थशास्त्री दाईहरूले हिसाबकिताब गर्नु भएकै होला ।
विद्वानहरूले भरिपुर्ण नेपाली कांग्रेसलेलय बिगार्दा देशको एक होनाहार पुस्ता नै देशबाट पलायन भयो । त्यहि कारणले माओवाद (अतिवाद) शुरू भएर यहाँसम्म आइपुग्दा के के भयो छर्लङ्ग किताब जस्तै छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले सायद त्यो कुरा आत्मसात गरे झैं भान हुन्छ ।
अहिले विश्वनै दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकटको भुमरीमा फसेको छ । यसवाट कसरी निस्कने होला ? उपाय के के होलान भनेर विकसित देश तातिरहेका छन । अविकसित हाम्रा जस्ता देश अब उनीहरूले काँध थाप्लान भनेर बस्ने बेला छैन । आफैं आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने दरिलो पाइला चाहिएको छ ।
यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको भुमिका एकदमै सराहनीय मात्रै हैन सुझबुझ पुर्ण नै देखिन्छ । विपक्ष दलको नाताले सरकारले गरेका राम्रा–नराम्रा जे कामको पनि आलोचना र समर्थन गर्न नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र नै छ र यो उसको त्यो धर्म पनि हो ।
अर्कोतिर जनताले विगत ३० वर्षमा देखेको राजनैतिक उथलपुथलले वाक्क भएर नयाँ प्रयोग नै किन नहोस, मिलेर आउनेलाई जिताउने र स्थायित्व चाहिन्छ भनेर मन नमिल्दा नमिल्दै नारिएका एमाले र एमाओवादी सम्मीलित पार्टीको गठवन्धनले मागे, सोचे र खोजे भन्दा धेरै भोट दिएर सत्ता सुम्पेका थिए ।
सुनौलो भविष्यको कल्पनामा डुबेका जनताले बिगत २ वर्षमा भएका धेरै काममा असन्तुष्ट हँुदाहुदै पनि सडकमा आएका छैनन, आउन गरिएका आह्वानलाई पनि लत्याएका छन । खासमा जनता राजनीति नै चाहन्नन भन्ने यो भन्दा ठूलो उदाहरण के होला । निरकुंस नै भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिदाँ पनि जनता चुप नै बसेका थिए, किनभने जनता स्थिरताको खोजीमा थिए ।
माथी भनिए झैं विश्व चरम संकटमा परेको बेलामा भाग्यवस हाम्रोमा दरिलो सरकार, बुझेका अर्थमन्त्री सहित भेट्रान नेताहरू छन जसले विगत ३० वर्षको घिनलाग्दो सत्ता हारालुछ देखि आफ्नो जिवनकालको कष्टपुर्ण जिन्दगी देखेका, भोगेका छन । जनता आशावादी छन सरकारले केही गर्ने छ, यी संकट जानेछन र देश एउटा आफ्नै खुट्टामा उभिने बलियो देश हुने छ ।
तर बिडम्बना विगत झण्डै २ महिना देखि देश पुर्ण रुपमा बन्दाबन्दी छ, जनता दुःखपीर भुलेर आफ्नो मात्रै हैन देशकै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जसोतसो घरभित्र बसिरहेका छन । यस्तो बेलामा स्थायित्व नारा लिएर सत्ता जितेका केही नेताहरु गिद्धले सिनो लुछे झैँ हारालुछीमा लागेका छन ।
हिजो नेपाली कांग्रेसले महामारीपछिको अर्को माहामारी ‘आर्थिक र सामाजिक महामारी’ को बारेमा छलफल गरेछ । राम्रो कुरा हो । विद्वान अर्थशास्त्रीहरू जम्मा भएर देशको post corona economy को बारेमा भएका बहस देख्दा मन प्रफुल्ल त भयो तर जुन काम सरकारले गर्नुपर्ने त्यो नहुदाँ एकदम दुःख लाग्यो ।
हाम्रा अर्थमन्त्री अब देशलाई post corona कसरी बचाउने ? जनताको दैनिकी कसरी चलाउने ? आउने दिनमा कसरी कमाउने र जनता पाल्ने भनेर सोच्नुपर्ने समयमा अहिले ‘मेरो पद रहन्छ कि रहन्न भनेर मोबाइल फोनमा घन्टी कुरेर’ बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुले मलाइ लाग्छ अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरि विनासको खाडलतिर धकेलिदै गएको भान हुँदै छ ।
प्रिय नेताहरू, तपाईहरूको जिन्दगी त जसो तसो गयो, त्यससपछि तपाईहरूको छोराछोरी यताउति गरेर खाइपाई आए होलान…नाति पुस्ता पनि त आइसक्यो होला ? अब फेरि इतिहासमा तपाईको स्थान कहाँ होला ? खासगरि नेकपा र यसका नेताहरू कृपया नेपाली कांग्रेसलाई सोध्नुस । नेपाली कांग्रेसको आफ्नो कथा तपाईको लागि शिक्षा हुनसक्छ । तपाईहरूको पद, लोभ, लालचले देश र जनताको चीरहरण नहोस । यो महामारीको बेलामा जनताको भोटको सम्मान गर्न सिक्नुस । फेरि २०४८ पछिको नेपाली कांग्रेस हैन अबको नेपाली कांग्रेस बन्न सिक्नुस किनकि तपाईको नेकपा उद्रिन लागि सक्यो। अस्तु! दिपक पौड्यालको ट्विटरबाट